Uphengululo lwe-UE BOOM 2: Uhlalutyo ngeempawu, amaxabiso kunye nezimvo | Iindaba zeGajethi
UE U-BOOM 2 uphononongo: uyilo olugqwesileyo lomgangatho wesithethi esingenazingcingo
UAlfonso De Frutos | | Izithethi, Reviews
Iindlebe zokugqibela yenye yeenkampani ezibaluleke kakhulu kwicandelo. Izithethi zayo ezivela kumgca we-BOOM zimangalisiwe kuyilo lwazo olunomtsalane, ukuxhathisa kunye nomgangatho wesandi. Ngoku ndikuzisela iphelele Uphengululo lwesithethi se-UE BOOM 2, imodeli yakutshanje yesixhobo kwaye eya kuvuyisa abathandi bomculo.
Umlandeli we-UE BOOM uneempawu a amandla kwizithethi zakho ezonyusa i-25% xa kuthelekiswa nemodeli yangaphambili, ukongeza ekubeni noluhlu lweBluetooth ukuya kuthi ga kumashumi amathathu eemitha, ke ungayithatha naphina. Kwaye ukuba sithathela ingqalelo ukuba ayimelani nokothuka kunye nokuwa, ukongeza ekubeni nayo Isiqinisekiso se-IPX7 Ukuze sikwazi ukuyifaka emanzini ngaphandle kokukhathazeka, phambi kwethu sinezona zithethi zingenazingcingo kwimarike.
1 I-UE BOOM 2 inoyilo olunomtsalane kunye nolwaphulo lomhlaba
2 Umgangatho wesandi onomdla kwizithethi eziphathwayo
2.1 Ukusebenza kwe-UE BOOM 2
3 Uluvo lomhleli
4 Amanqaku afanelekileyo
5 Amanqaku ngokuchasene
I-UE BOOM 2 inoyilo olunomtsalane kunye nolwaphulo lomhlaba
Into yokuqala oyiphawulayo xa uqala ukuthatha i-UE BOOM 2 kukuba sijonge imveliso yakhiwe kakuhle kakhulu kwaye ikhupha umgangatho kuyo nayiphi na pores yayo. Isithethi sinesigqubuthelo serabha esisongele isixhobo, siyenze ibe mnandi ngakumbi ekuphathweni kwaye ibambe kakuhle. Ngale ndlela, nokuba i-UE BOOM 2 iba manzi, ungayikhetha ngaphandle kokukhathazeka malunga nokutyibilika.
Ubukhulu bayo buncinci, ine ububanzi be-67mm kunye nokuphakama kwe-180mm Benza i-UE BOOM 2 iluncedo kwaye inokuthathwa naphina. Gqamisa imilo yayo erhangqiweyo eyenza ukubambelela kwesixhobo. Okokugqibela, iigram zayo ezingama-548 ubunzima bomzimba ngumkhenkce kwikhekhe lesixhobo esilelwe ukusisa naphi na.
Phezulu kwe-UE BOOM 2 kulapho isithethi kwi / off iqhosha, Ukongeza kwelinye iqhosha elincinci elisetyenziselwa ukungqamanisa i-UE BOOM 2 ngaso nasiphi na isixhobo seBluetooth.
Sele ngaphambili sifumana amaqhosha olawulo lwevolumu. Indlela yabo ingaphezulu kokuchanekileyo kwaye banikezela ngemvakalelo enempumelelo kakhulu ekuchukumiseni, besazi ngawo onke amaxesha xa ubacinezele. Indawo yayo intofontofo kwaye iyasebenza. Khumbula ukuba ezi zithethi ziyilelwe ukuba zithathwe naphina kwaye ngaphandle kokuchukumisa ifowuni yakho elunxwemeni ukuphakamisa, ukunciphisa ivolumu okanye ukutshintsha iingoma yindawo ekufuneka uyiqwalasele. Emva kwexesha ndiza kuthetha ngalo msebenzi.
Okokugqibela, emazantsi e-UE BOOM 2 kulapho izibuko likhoyo i-USB encinci ukubiza isixhobo, dibanisa a Iziphumo zeaudio 3.5mm kunye nomsesane omncinci wokubamba izithethi kuyo nayiphi na inkxaso. Ngamafutshane, i-UE BOOM 2 inoyilo olukhulu oluya kusivumela ukuba siyise naphina. Ngaba uyafuna ukukhwela ibhayisekile? Qhoboshela isithethi kwisitendi samanzi kwaye wonwabele umculo.
Ngokwam Ndizisebenzisile elunxwemeni, ukuskiya, ukuhamba ngephenyane kunye nayo yonke imihla kwishower(abamelwane bam bandithiya nangakumbi). Ewe kunjalo, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba i-UE BOOM 2 iyazika ke ndicebisa ukuba, ukuba uza kuyisebenzisa emanzini, yibophele isixhobo kwivenkile yakho ngeringi engezantsi, ke uya konga ngokungeyomfuneko uloyiko.
Umgangatho wesandi onomdla kwizithethi eziphathwayo
Uyilo lwe-UE BOOM 2 lufezekile: isixhobo esikhanyayo, esikulungeleyo ukunxitywa kwaye sinokubambelela okuhle ukuba sisetyenziswe nakweyiphi na imeko, kodwa sivakala njani esi sithethi? Sele ndikuxelele ukuba, kuthathelwa ingqalelo imilinganiselo yayo, sesinye sezona zithethi zibalaseleyo ndizizamile. Ngaphambi kokungena kulo mbandela, ndikushiya neempawu zobuchwephesha ze-UE BOOM
Ukusebenza kwe-UE BOOM 2
Isithethi esingenazingcingo se-360
Ukungena manzi (i-IPX7: ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-30 kunye nobunzulu beemitha ezi-1) kunye nokothuka okunganyangekiyo
Iiyure ezili-15 zobomi bebhetri (Ixesha lokutshaja: iiyure ezingama-2.5)
I-Bluetooth A2DP enoluhlu lweemitha ezingama-30
I-app engenazintambo kunye nokuhlaziywa
Isandi se-3,5mm siphelile
Uluhlu lwamaxesha: 90 Hz - 20 kHz
Kwiphepha esinalo izithethi ezipheleleyo. Kwaye xa kufikwa ekusebenziseni, zilunge ngakumbi. Ekuqaleni kwenqaku ndikuxelele ukuba ezi UE BOOM 2 zinamandla angama-25% ngaphezulu xa kuthelekiswa nemodeli yangaphambili kwaye, emva kokuvavanya zombini iimodeli, kuye kwacaca ukuba umenzi akabaxi.
Nokuba zingangxola kangakanani izithethi, ukuba umgangatho wesandi uphantsi, amandla alo awasebenzi kangako. Ngethamsanqa Isithethi se-UE BOOM 2 sivakala silungile, ukunikezela ngesandi esicacileyo, esikumgangatho ophezulu.
Isandi sinokulinganisela, ukufikelela kwi Umgangatho olungileyo ngokwenene ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-90 zamandla apheleleyo. Ukusuka apho kuvela ubugqwetha kunye nengxolo, kodwa sele ndikuxelele ukuba ngamandla amangalisayo esi sithethi siwanikezelayo, uninzi lwabasebenzisi aluyi kufuna ukwandisa umthamo wesithethi ngaphezulu kwe-80%. Nokuba usete imeko yepati okanye ye-barbecue, i-70% ingaphezulu ngokwaneleyo.
Su I-Bluetooth Low Energy inoluhlu lweemitha ezingama-30, Ukuvumela ukuba usebenzise izithethi kumgama owaneleyo. Endlwini yam, ndiyishiyile ifowuni edityaniswe malunga neemitha ezili-15, ineengcango ezimbini phakathi, kwaye isithethi sisebenze ngokugqibeleleyo.
La Ukuzimela kwe-UE BOOM 2 ziiyure ezili-15 zokusebenzisa. Apha ndifikelele kwiiyure ezili-15 ngevolumu eyi-30-40% kodwa ndibeka ingcongolo kwaye ndibeka isithethi kwi-80% yamandla ukuzimela kwehla kwiyure ezili-12, inani elisabonakalayo kwaye lingaphezulu kokwaneleyo. Ukongeza, isithethi singena kwimodi yokulala emva kwethutyana singasisebenzisanga kungoko singazihluphi ngokuyicima nokucima kuba ngokufaka isicelo sinokuyenza okanye siyenze isebenze i-UE BOOM 2 ngendlela esithanda ngayo. Kwaye ibhetri ibiza ngaphezulu kweeyure nje ezimbini, ke akukho nto igxekwayo malunga noku.
Inoveli enomdla kakhulu iza ne ulawulo lomzimba; umzekelo, xa uphakamisa i-UE Boom 2 ngesandla esinye kwaye ucofe indawo ephezulu yesithethi ngentende yesinye isandla, siya kumisa umdlalo wokudlala de sichukumise indawo ephezulu kwakhona. Kwaye kunye nokuchukumisa okukhawulezayo siya kuqhubela phambili ingoma. Ngale ndlela asizukuyichukumisa ifowuni ukuba sifuna ukuhamba neengoma.
Abafana kwiiNdlebe zokugqibela benze ifayile ye Isicelo esigqibeleleyo esiza kusivumela ukuba silawule imisebenzi eyahlukeneyo ye-UE BOOM 2 kwifowuni yethu. Insiza, iyahambelana zombini izixhobo Android kunye iOS, ikuvumela ukuba ubone inqanaba lebhetri, ivolumu yesithethi kunye neenkcukacha ezinomdla kakhulu ezinje ngokunokwenzeka zokuvumelanisa ii-smartphones ezininzi ngaxeshanye ukuze umntu ngamnye adlale umculo awufunayo. Sinokudibanisa ii-UE BOOM okanye izithethi ze-UE Roll ukumamela umculo kwizixhobo ezininzi ngaxeshanye! Lo msebenzi undothusile kuba ukuvumela ukuba unyuse isandi esimnandi kunye nezixhobo ezimbalwa.
Enye inkcukacha enomdla iza ne Isiqinisekiso se-IPX7 enika i-UE BOOM 2 ukumelana namanzi, ukubanakho ukuntywila isixhobo ukuya kuthi ga kwimitha e-1 ubunzulu imizuzu engama-30. Ndivavanye kwikhephu nasemanzini kwaye isithethi sisebenza ngokugqibeleleyo. Ewe kunjalo, njengoko bekulindelekile, phantsi kwamanzi abayi kuvakala ukusukela oko uphawu lweBluetooth lulahlekile. Kulula njengokuthatha i-UE BOOM 2 emanzini ukuze uqhubeke nokonwabela umgangatho wayo wokumamela.
Ngale nto, i-UE BOOM 2 ineekepusi ezigubungela indawo yokuphuma, ezi kufuneka zivalwe kakuhle ukuze amanzi angangeni, kodwa ungakhathazeki ukuba nokuba kunetha kangakanani, ikhephu okanye iindudumo, ungasisebenzisa isithethi ngaphandle kweengxaki. Imfihlo yakho? UE BOOM 2 azinayo nayiphi na into yentsimbi.
Nangona ukusukela oko iindlebe zokugqibela bengafuni ukunika i-UE BOOM 2 nangasiphi na isiqinisekiso somkhosi, kufuneka nditsho isixhobo sixhathisa ngokwenene iimpembelelo kunye nokuwa. Ngexesha lomboniso ndibone abantu abaliqela benyukela phezulu ukubonisa ukungavumi kwabo kwaye nemodeli yam iwile amaxesha ambalwa, ndiyacaphuka xa ndinyanisekile, kwaye khange ifumane monakalo, ke ndiyakuqinisekisa ukuba UE BOOM 2 sisithethi esinzima.
El I-UE BOOM 2, efumaneka ngemibala eyahlukeneyo ukuze ukhethe imodeli oyithandayo, inexabiso elisemthethweni lama-euro angama-199, nangona ungalithenga ngoku kwiAmazon cofa apha ngee-euro ezingama-133 kuphela. Isivumelwano sokwenene ukuba sijonga amathuba esi sithethi se-bluetooth esingamanzi.
I-EU BOOM 2
Umgangatho wesandi omangalisayo
Amanzi, umothuko kunye nokwehla kokunganyangeki
Ixabiso elinomdla kakhulu lemali
Nangona ithengisiwe, ixabiso laseburhulumenteni lama-euro angama-200 linokubuyela umva
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Izithethi » UE U-BOOM 2 uphononongo: uyilo olugqwesileyo lomgangatho wesithethi esingenazingcingo
Ndine-UEBOOM kwaye yonke into ilungile, kodwa xa ibhetri yangaphakathi ihambile, sala isithethi. Inkampani indixelele ukuba abanazo iibhetri zokutshintsha ... kwaye ngaphandle kwebhetri isithethi asisebenzi nokuba sixhunyiwe kumbane wombane. UKUSETYENZISWA KWENKQUBO YENKQUBO: isithethi sihlala ixesha elide ibhetri ihlala isebenza, ukusukela ngalo mzuzu, kudoti.
URicardo Reyes sitsho
Ndithenge i-UE Boom 2 kwaye iyaxoka ukuba ihlala iiyure ezili-12 kwi-80% yevolumu eyona inde kakhulu ihlala iiyure ezi-2 eziyingozi, ekugqibeleni kuye kwafuneka ndiyitshintshe ibe yi-JBL, kuya kuba kuhle ukuba imveliso Ukucaciswa kuyinyani kwaye kuye kwavavanywa
Phendula uRicardo Reyes
Kodwa ngaba ucinga ukuba aba bantu bavavanya ngokwenene iimveliso? Bangenalwazi Aba bantu baninzi kwi-Intanethi kwaye bazibiza ngokuba "ziingcali", "abathandi betekhnoloji" okanye naliphi na elinye ibinzana eliqokelelweyo bazinikezele ukukopa nokuncamathisela ukukhutshwa kweendaba, behombise kancinci kwaye besenza intengiso enkulu, ngethemba elililize loko iimveliso zinika iimveliso zasimahla zokuzisebenzisa kunye nokonwaba.
Isampulu, eli nqaku. Akukho ndawo ibonisa amandla okwenene esithethi okanye ukuba ukutsiba phakathi kwezikali zevolumu kukhulu kakhulu.
Ewe jonga ndinayo kwaye ndiyangqina ukuba ihlala ngaphezulu kweeyure ezili-10 ngo-70 no-80, oko kukuthi eyakho iya kuba neziphene.Yabelana nge-jbl enesandi esimdaka kwaye kakhulu kwisitayile sakho sokugxeka nokungcolisa uphawu olwenze umsebenzi wasekhaya kakuhle kunye nemveliso yakho ayifani ne-jbl kunabanye nje
Ngapha koko, qhubeka uhamba ne-jbl, ngokuqinisekileyo engayi kuhlala ngaphezulu kweeyure eziyi-100, ngokuqinisekileyo ayizukuthwala okanye ibhetri xa ushukuma ngamandla omzimba wakho kwaye kuvakala ngathi ziingelosi zezulu ...
Albert mosquera sitsho
Andiqondi ukuba olu phawu, olunikezelwe ikakhulu ekwenzeni iimpuku ze-PC, lube phakathi kwezinto ekuthiwa zezona “zithethi zeBluetooth zibalaseleyo kwintengiso. Bahlala bevela "kuhlalutyo" ngobungqwabalala obunje. Uhlawula malini uLogitech ukuze azenze ilungisa? Kungenzeka njani ukuba le nkunkuma yezithethi, ngaphandle kokuchazwa ngokupheleleyo kunye nokusetyenziswa gwenxa kweebhasi, ihlikihla amahlombe kunye neHarman Kardon, iVifa, iBowers kunye neWilkins, i-JBL okanye iBang & Olufsen? Oko kukuthi ukubiza nje ezimbalwa iingcali ezikumgangatho ophezulu ngokwenyani.
Phendula u-Albert Mosquera
U-Israyeli wamantongomane sitsho
Ndisandula ukuthenga i-UEboom2 kwaye ndinamathandabuzo malunga nexesha, ihlala kancinci kakhulu kwaye ayifiki kwiiyure ezi-3. Ngaba ikhona ingcali enokundinceda? Ndingathanda ukwazi ukuba umntu ufake isicelo sokuqinisekisa kwaye ngayiphi indlela.
Phendula ku-Israyeli Amantongomane
I-Seagate iyathetha nge-hard drive yayo eyi-14 kunye ne-16 yeTB
I-Megaupload 2.0 ilibazisekile, ngenxa yokuTshintshiselana kweSitokhwe eCanada